सेलिब्रेटी - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र २८, २०७४
साहिल खानलाई पहिलो पटक भेट्दा जो–कोहिलाई लाग्न सक्छ, उनी चलचित्रका अभिनेता हुन् । बलिउड अभिनेता सलमान खानका भाइसंग नाम ठ्याक्कै मिलेकाले मात्र होइन, आकर्षक व्यक्तित्वका कारण पनि उनलाई धेरैले अभिनेता नै मान्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ १७, २०७६
सबैको आ–आफ्नै स्वतन्त्र जीवन हुन्छ । कोही कसैका दास हुँदैनन् । को के गरिराछ, चियोचर्चा गर्ने समय आफ्ना लागि खर्चिनुस् अनि आफ्नै जीवनलाई सार्थक बनाउनुहोस् । पुरा पढ्नुहोस्
सबैलाई थाहा छ, रेखा थापा राजनीतिमा रुचि राख्छिन् । यद्यपि धेरैलाई के थाहा छैन भने कमल थापाको राप्रपामा भएकी रेखा किन विप्लव माओवादीप्रति सहानुभूति देखाउँछिन् आफ्नो ट्विटरमा । गणतन्त्रवादी माओवादीबाट एकैपटक राजतन्त्रवादी कमल थापाको पार्टीमा हामफाल्न सक्ने रेखा आफ्नै मर्जीकी मालिक्नी हुन् । उनले कतिबेला के गर्छिन् वा के भन्छिन्, कसले भन्न सक्छ र ? पुरा पढ्नुहोस्
मोडल तथा अभिनेता विमलेश अधिकारी अमेरिकाको लोकप्रिय ब्रान्डेड स्टोर मेसिजका लागि स्टाइल एम्बेसडर नियुक्त भएका छन् । तीन वर्ष देखि अमेरिकामा बस्दै आएका विमलेशले दुई सय भन्दा बेसी म्युजिक भिडियो तथा केही चलचित्रहरुमा अभिनय गरिसकेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख १९, २०७६
सरु उपनामले चर्चित सरस्वती लामा रक गायिका हुन् । आफूले गाएका गीतको म्युजिक भिडियोलाई उनी आफैं कोरियोग्राफी तथा निर्देशनसमेत गर्छिन् । नृत्यमा पारंगत सरस्वती यतिबेला ‘द डार्क एन्ड लाइट’ चलचित्रमार्फत दर्शकमाझ आउने तयारी गरिरहेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा सबैभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अभिनेत्री को हुन् ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ– केकी अधिकारी, अनु शाह तथा शिल्पा पोखरेल । हो, केकी, अनु र शिल्पा जस्ता संख्यात्मक रूपमा बढी म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अर्की अभिनेत्री छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र २९, २०७५
अभिनेत्रीबाट निर्देशकका रूपमा बढुवा भैसकेकी झरना थापा यतिबेला आफ्नो दोस्रो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर–३’ का कारण चर्चामा छिन् । चलचित्रका प्रायः सबै प्रचार सामग्रीले राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि उनको उत्साह समेत बढेको छ । चैत २९ गते आज प्रदर्शनमा आएको उक्त चलचित्रमार्फत झरनाले आफ्नै छोरी सुहानालाई अभिनेत्रीका रूपमा पदार्पण गराउँदै छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र २१, २०७५
सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम सेलिब्रेटीहरूमाझ लोकप्रिय मानिन्छ । हलिउड र बलिउडमा मात्र होइन, नेपालमै पनि अधिकांश सेलिब्रेटी आफ्ना गतिविधिका तस्बिर तथा भिडियोहरू इन्स्टाग्राममै सेयर गरिरहेका हुन्छन् । अहिले इन्स्टाग्रामले नेपाली सेलिब्रेटीहरूलाई धमाधम भेरिफाइ (आधिकारिक) गर्न थालेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , फाल्गुन ५, २०७५
अभिनेता भुवन केसीले केहि वर्ष अघि चलचित्र ‘ड्रिम्स’ निर्माण गरे । यहि चलचित्रबाट भुवनका छोरा अनमोल केसी अभिनेताका रुपमा रजतपटमा भित्रिए । यस अघि पनि उनले चलचित्र साथी म तिम्रोमा छोटो भूमिका त निर्वाह गरेका थिए । यहि चलचित्रबाट अभिनेत्रीका रुपमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अनमोलको जोडीका रुपमा रजतपटमा पर्दापण गरिन् । पुरा पढ्नुहोस्